Caano laga deeyriyey Cabitaankooda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caano laga deeyriyey Cabitaankooda
La daabacay tisdag 5 juni 2012 kl 16.49
Warshadaha caanaha ee nawaaxiga gobolka Skåne ayaa qeeylo-dhaan ka bixiyey 3 000 oo litir ee caanaha lagu soo saaro habka cimilada u wanaagsan ey ku milmeen sun midda maarta lagu fujiyo ah, sida ay qortay hayadda wararka ee TT.
Caanaha ayaa leh dhadhan aad uga duwan sidii horey looga bartey, iyadoona ciddii cabtay ee dareen galey ama iska dareentay xannuun lagu talo-gelinayo inay la xiriirto howl-wadeennada daryeelka caafimaad.
Sida lagu qoray war-saxaafadeed in caanaha wasaqoobay yihiin kuwa litirka u baakadeeysan ee la soo saaray saddexdii bishii juun, islamarkaana dhacaya 12 juun. Iyadoo ciddii iibsatay caanaha taariikhdaa ah ey bedelkooda ka heli karaan dukaankii lagaga iibiyey. Warshadaha caanaha soo saara ayaa u sheegey hayadda wararka ee TT in caanaha wasaqoobay badankood markiiba laga soo celiyey dukaammada.